Indlu encinci entle emasangweni oMhlaba wamaChibi - I-Airbnb
Indlu encinci entle emasangweni oMhlaba wamaChibi
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLionel
Indlu ethe cwaka enomgangatho omnye ekude nelali enamagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlala eli-1 elivula ikhitshi elinezixhobo, igumbi lokuhlambela kunye nethafa elikhulu ngasemva elijonge isiza esikhulu.
Ekumgama omalunga kms 8 ukusuka Lake Pierre-Percée, ifanele esingise kwaye ngeebhayisikile (Club Vosgien ezityhutyhayo nebhayisekile intaba kunye nomjikelo yokuhambela neziphaluka), unako kwakhona ukunandipha ukuqubha e Lake Celles-sur-Plaine kwi kms-15.
Kule ndlu ithuleyo inomgangatho omnye kude nelali, uya kufumana amagumbi okulala ama-2, elinye lawo lingabazali elinebhedi yobukhulu bukaKumkanikazi, ikhitshi elixhotyisiweyo elivuleleke kwigumbi lokuhlala / lokutyela kunye negumbi lokuhlambela.
Ngaphandle, uya konwabela ithala elikhulu lokuhamba kwidekhikhi okanye ixesha lakho lebarbecue elijonge indawo enkulu.
Uya kufumana kwakhona phambi kwendlu indawo yokuphumla kunye neyokutyela ekhuselweyo kwimozulu embi phantsi kwe-roofhang overhang.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Maurice-aux-Forges